I-Texas Holdem Yabaqalayo - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Texas Hold’em » I-Texas Holdem Yabaqalayo
I-Texas Hold’em Yabaqalayo
Ingabe lolu uhlobo lokugembula?
Isu eliyisisekelo okufanele sililandele eTexas Hold’em
Ungawina kanjani uma udlala nabadlali abajwayelekile beHold’em
Amandla esandla ku-poker
Isu le-pre-flop ongalisebenzisa
Ukudlala iTexas Hold’em Post-Flop
Izinzuzo zokudlala endaweni
I-Texas Hold’em ingahle ibonakale njengomdlalo wekhadi onzima ukuwudlala, kepha kumnandi futhi kulula ukukufunda unikezwe ukuqondiswa okulungile nezinsizakusebenza. Futhi uma ufuna ukufunda umdlalo, ngabe usufike ekhasini elifanele nangezinsizakusebenza. Kulesi sihloko, sikusiza ukuthi uqonde imishini yomdlalo. Lo mbhalo nomhlahlandlela ubhalwe ngokucabanga ukuthi unolwazi oluyisisekelo lomdlalo futhi ufuna ukunweba okwaziyo.
Sisendaweni empunga kulokhu. Okokuqala, kufanele wazi ukuthi lo mdlalo uzofaneleka njengendlela yokugembula ngoba awukwazi ukulawula amakhadi ozonikezwa wona, noma amakhadi abanye abadlali, noma yimaphi azofika ku-flop. Ongakulawula lapha inani lemali ongalifaka ebhodweni. Lokhu kusho ukuthi nguwe olawula ukuthi kuzokwenzekani ngebhange lakho.
Ngokulawula inani lemali ozozibeka ngalo ebhodweni ngokususelwa ezimweni ezivumayo, bese ugoqa lapho ucabanga ukuthi amathuba akuvumeli, unganqoba emdlalweni we-poker. Vele, kukhona nethuba elikhulu lokuthi uzolahlekelwa ngenxa yezimo ongeke ukwazi ukuzilawula. Kepha lokhu kulahleka kungalawulwa kahle uma ungathatha izinqumo ezingcono uma uqhathanisa nabanye abadlali ababambe iqhaza emdlalweni.
Emdlalweni we-poker, impi iphakathi kwenani lezandla. Ukuqubuka phakathi kwezandla ezincintisanayo kuqala lapho unikezwa amakhadi amabili emigodi. Isu lapha wukuza nesandla esihle kakhulu ngaphambi kwe-flop. Kunconywa ukuthi udlale i-18 kuye kuma-20% wezandla etafuleni le-poker elijwayelekile.
Impumelelo yakho emdlalweni izoncika enanini lamakhadi owasongelayo futhi owadlalayo. Uma ufaka amakhadi wokudlala, khona-ke ngeke kukuklomelise ngenzuzo ethembisayo. Kukhona ithuba lokuthi uzolahlekelwa yimali ezandleni ezibuthakathaka ezingenakunxeshezelwa ngezandla ezinhle. Abadlali abanolwazi bahlala bephakamisa ukuthi njalo badlale ngokuqinile.
Uma ubamba iqhaza emidlalweni ejwayelekile ye-poker ekhasino, uzothola ukuthi imidlalo eminingi ikhululekile futhi abadlali abaningi bathambekele ekudlaleni i-30% yezandla zabo. Khumbula ukuthi lapho bedlala izandla ezibuthakathaka ngaphambi kwe-flop, bazophinda basuse amanani afanayo esandla ngemuva kwe-flop. Izandla ezibuthakathaka zingokwesibili ezihamba phambili etafuleni, futhi ufuna ukusizakala ngalawa makhadi adlalwe abanye abadlali.
Inhloso enkulu yalo mdlalo ukuqhamuka nesandla esihamba phambili ngemuva kokuthi wonke amakhadi omphakathi ayisihlanu ebhekiwe. Akunakwenzeka ukusho ukuthi isandla sakho silunge ngokwanele yini ngoba ukubaluleka nokubaluleka kwezandla kuzoncika nakwabanye. Kepha uma ukwazi ukudlala ngokuqinile isikhathi esiningi, ungaqhamuka nezandla ezingcono nezandla ezibuthakathaka kancane.
Ngesikhathi sesandla ngasinye, kufanele njalo ucabangele amakhadi ebhodini kanye nezinhlanganisela zezandla ezingazakha. Kulomdlalo wamakhadi, ulwazi lubalulekile ekwenzeni izinqumo ezifanele.
Ngaphambi kokuthi udlale iflop, udinga ukulungiselela kuqala amakhadi amabili okuqala owabelwe. Inhloso yokuqala ukuqhamuka nokubhangqa okuphezulu, noma enye engenakho ukuhlanganiswa kwamabhangqa ebhodini okungadlula okwakho ngemuva kokuqhuma ngomkhahleli omkhulu. Enye indlela ukuza nesandla esinethuba elihle lokwenza ‘isandla esikhulu’ njenge-flush noma iqonde.
Ukudlala i-KK, QQ, JJ ne-AA
Lezi yizandla eziyigugu emdlalweni we-poker. Ngesikhathi sokubonisa, ukubhangqwa okukodwa kubhekwa njengokuhamba phambili. Futhi uma uphathwa ngala makhadi, kunconywa kakhulu ukuthi uwakhulise. Uma uphethe i-AA-KK noma i-QQ, kufanele njalo uphakamise futhi uvuse futhi.
Ukudlala i-AK-AJ ne-KQ
Lawa makhadi ashaya i-flop; zingahlangana zenze i-top top ne-kicker enhle. Abaqobayo babalulekile kulo mdlalo wamakhadi ngoba abadlali be-poker bazoshaya ngababili abafanayo, futhi ngumkhahleli kuphela ozophula uthayi. Uma unamabhangqa, umkhakha uzoqala ukudlala. Ukuze wandise amathuba akho okuwina ngomkhabi, kungcono ukuthi uhlale udlala ngokuqinile. Ungadlala futhi namabhangqa aphezulu uma kukhona ukukhushulwa okwenziwe etafuleni. Uma kungekho ophakanyisiwe, ungaphakamisa izandla ukuze uthuthukise inani lazo ngaphambi nje kwe-flop.
Ukudlala izixhumi ezifanele: QJs-89s
Emidlalweni eminingi ye-poker, abanye abalingisi bavame ukudlala amakhadi amabili afanelekile. Leli iphutha elilodwa okufanele uligweme uma ufuna ukunciphisa ukulahleka kwakho. Ongakwenza kunalokho ukugxila kuzixhumi ezifanele ngoba lezi zingakwazi ukudonsa imidwebo eqondile futhi eshaywayo. Okufanelekile noma okuxhunyiwe akwanele; bobabili kumele bethule.
Izixhumi ezifanelekile zingakusebenzela ngoba lokhu kungakusiza ukuthi uwine imidlalo lapho iba yimikhondlakhondla kanye nemikhuhlane. Yize lawa makhadi engakuholela ekuwineni okukhulu, sincoma ukuthi lawa kufanele asongwe ukuze akhushulelwe ngaphandle kokuthi ukukhushulwa kwawo kuncane kakhulu. Ungasizakala ngalezi zandla uma ungathola la makhadi eshibhile.
Ukudlala ama-pocket pair: TT-22
Lawa makhadi angaba nenjongo yawo nasezandleni zakho. Ngamaphakethe amabili amancane naphakathi, iflop ingaletha okungenani eyodwa ngaphezulu kwekhadi kulaba ababili. Uma uphethe u-6 weDayimane no-6 weSpade kanti ibhodi liza neJack of Diamond, King of Clover kanye ne-3 yeSpade, isandla sakho sicishe sibe yize. Inani langempela lamabhangqa ephaketheni lizokwenzeka lapho zishaya kathathu ngomusa. I-three-of-a-kind ibalulekile ku-poker, futhi uma uyishaya, kufanele uhlose ukuthola konke.
Ukudlala i-Ace-X kufanelekile: Ama-A9s-A2s
Lawa yi-Aces ebuthaka okufanele nayo uyidlale. Lokhu kuyadlaleka ngoba kufanelekile. Uma ukwazi ukuqhamuka ne-ace-high flush, kunethuba lokuthi uzowina isitaki sonke somunye umdlali uma ene-flush encane.
Lesi yisona sizathu esenza abanye abadlali balahlekelwe lapho beshaya ama-aces amabili, omunye umdlali abe nababili abafanayo kepha abe nomkhahleli omuhle. Izandla ze-A-Xs akufanele zifakelwe ukuphakanyiswa ngaphandle kokuthi iphakanyiswe kancane futhi kukhona abanye abadlali.
Kudlala ezinye izandla
Ezinye izandla kufanele zigwenywe lapho kunokwenzeka. Amakhadi achazwe lapha yiwo okufanele usebenze kuwo, futhi wonke amanye kufanele weqiwe ngoba ngeke akhulise amathuba akho etafuleni. Lapho udlala i-poker, khumbula umthetho owodwa oyisisekelo- izandla ezinhle ngaphambi kokuba i-flop ibe izandla ezinhle ngemuva kwe-flop, futhi izandla ezinhle zingakusiza wenze izinqumo ezilula.
Lapho iflop iphuma, kufanele uhlole ngokushesha inani lesandla sakho. Bheka ibhodi bese ubona ukuthi yini enye inhlanganisela engenzeka, nokuthi isandla sakho siqhathaniswa kahle kanjani nokunye.
Qaphela: Ofuna ukukufeza phakathi nalesi sigaba ukuza nama-pair aphezulu noma okungenani uthole ithuba elihle lokwenza isandla esikhulu.
Uma ukwazile ukuthola ipheya kodwa lincane kuneliphezulu, futhi ukubheja sekukhona, siphakamisa ukuthi ugoqe. Uma ubamba ngababili phezulu futhi une kicker omuhle, ke ungakwazi ukugembula noma ukushaya ucingo. Naka ukuthi isandla sidlalwe kanjani: ama-pair aphezulu ahle, kepha uma abanye abadlali bekhulile, khona-ke iqembu lakho eliphambili kungenzeka lingakulungeli ukugembula.
Izikhumbuzi ngokukhishwa: Ukudweba kungenzeka uma ungenza i-flush noma iqonde ekhadini elilandelayo. Lokhu kubizwa nangokuthi izandla ezinkulu ngoba ukuqhuma nokuqina kuvame ukuba kuhle ngokwanele ukudala ukuwina.
Kepha akuyona yonke imidwebo edalwe ngokufana. Isibonelo, idayimane elingu-5 neli-6 ku-7 ye-Hearts, i-3 ye-Hearts ne-Ace ye-Diamonds board lizophuma kane. Ama-4s amane nokudweba kubuthakathaka ngoba i-4 ye-Hearts inganikeza abanye abadlali ithuba lokwenza i-flush.
Manje, uma udinga ikhadi eliphakathi ukwakha iqonde, lokhu kwaziwa njenge-poker njenge-gutshot. Futhi ukudweba okungcono okuqondile kubizwa ngokuthi i-open-ender. Isibonelo salokhu yi-8 ne-9 ye-Spades ku-6 ye-Hearts, i-7 ye-Spade ne-Jack ye-Diamond board. Ama-open-enders athathwa njengongcono kunama-gutshots.
Akufanele uthembele kakhulu kuma-gutshots adlule i-flop ngaphandle kokuthi ubhekene nokubheja okuncane. Ukudonsa okugelezayo, ngakolunye uhlangothi, kuzoba nokukhishwa okuyisishiyagalolunye futhi kuthathwa njengokuqinile. Ungenza ucingo ku-flop, futhi uma uphuthelwa ithuba, uphinde uphuthelwe yithuba lakho ngaphandle kokuthi ukubheja kuncane.
Uma ujoyina ithuba, kuzodingeka udlale ngabadlali ababili noma abathathu. Uma umdlali efinyelela kulesi sigaba, khumbula ukuthi okungenani unengxenye yebhodi. Uma kunguwe owaqala ukubheja kanti ithuba alizange liveze izinguquko eziningi, qhubeka nokubheja kwakho. Uma ithuba liza nokudonsa okuqondile noma ukuqhuma, qaphela lapho uhamba ngokulandelayo. Manje uma ubheja nomunye umdlali ephakanyisiwe, siphakamisa ukuthi ugoqe.
Udinga ukuzilungiselela umfula, futhi lokhu kungenziwa ngokusebenzisa lonke ulwazi olutholakalayo emakhadini nasetafuleni. Umdlalo ngamunye ogcwaliswe ngumdlali kufanele akunikeze imininingwane ethile mayelana nesandla. Uma umdlali ephakama ngaphambi kwe-flop futhi ebheja i-flop, i-turn kanye nomfula, kusho ukuthi kusho ukuthi ubambe isandla esikhulu.
Manje, uma ephakama ngaphambi kwe-flop, ebheja ku-flop bese ebheka indawo nomfula, kulindeleke ukuthi isandla sakhe sibe buthakathaka. Kungcono ukuthi uqoqe imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka futhi usebenzise amakhono akho okucabanga abucayi lapho wenza isinqumo.
Uma ufuna ukuwina emdlalweni we-poker, kufanele futhi unake isikhundla. Isikhundla, njengoba sisetshenziswe emdlalweni, sizobhekisa ekubekweni kwakho noma ebangeni mayelana nenkinobho yomthengisi, enikeza ukuthi ngubani ozosebenza ekugcineni ngesikhathi sesandla. Ukulingisa ekugcineni emdlalweni we-poker kuzokunikeza imininingwane ethe xaxa, ngaleyo ndlela kukusize wenze isinqumo esifanele. Ngamafuphi, usuphethe isimo.
Yebo, i-poker ngumdlalo ongawushaya ngokuhamba kwesikhathi, futhi ungalawula inani lemali obhejayo ngalo, kepha kuseyindlela yokugembula. Unquma inani, kepha amakhadi athathwe emphemeni angaphezu kwamandla akho.
Kuza nento yenhlanhla eyenza ithakazelise kepha futhi ingaba ngumthombo wokukhungatheka kwabaningi. Lo mdlalo uzohlola amakhono akho okwenza izinqumo, futhi uchungechunge lwezinqumo ezinkulu lungonakaliswa isenzo esisodwa esingenalwazi. Kuyimvelo yomdlalo wamakhadi njenge-poker, futhi kufanele uwulungele.
Njengoba kunezici ezithile ekudlaleni, into engcono kakhulu ongayenza ukujabulela nokuzijabulisa kalula. Uma idlalwe ngendlela efanele, i-poker ingaletha ukuwina okuhle, futhi ungakujabulela ekugcineni!
I-Texas Hold’em Poker ngumdlalo wamakhadi omnandi onezici ezithile zokugembula ngoba awunamandla okuphatha amakhadi owasebenzise.
Isu elijwayelekile elizosetshenziswa lapho kudlalwa i-poker ukudlala ngokuqinile.
Ukuqonda amakhadi aphezulu namandla esandla kubalulekile ekujabuleleni umdlalo nasekugodukeni nembiza.
Kunamasu athile umdlali angawasebenzisa lapho edlala i-pre-flop, umfula, nejika.
Kubalulekile ukwazi isikhundla somuntu kulo mdlalo futhi ukusizakale.